“Cunto macaan iyo Gabdho shidan.”. Samir Nasri oo daaha ka rogay sababta uu ugu biiray naadiga Sevilla – Gool FM
“Cunto macaan iyo Gabdho shidan.”. Samir Nasri oo daaha ka rogay sababta uu ugu biiray naadiga Sevilla
Byare December 24, 2016
(Spain) 24 Dis 2016. Samir Nasri ayaa daaha ka rogay in gabdaha shidan iyo cuntada macaan ee laga heli karo Sevilla ay ku qancisay inuu ka soo tago naadigiisa Man City.
29-jirka ayaa ugu biiray kooxda reer Spain heshiis hal sano oo amaah ah bishii August, iyadoo uu 5-tii sano ee dambe uu ku soo qaatay gegada Etihad Stadium.
Nasri ayaa dhaliyay 3-gool 13-kulan uu ka soo muuqday dhammaan tartamada kooxdiisa cusub kal ciyaareedkan wuxuuna sheegay inuu dareemay inay tahay waqtigii uu ka hawo gadisan lahaa magaalada Manchester iyadoo ay jirtay in Pep Guardiola uu doonayay inuu sii joogo kooxda.
“Waqti fiican ayaan qaatay kulamadii la isugu diyaarinayay kal ciyaareedka cusub, laakiin waxaan doonay is badel, Guardiola wuxuu doonayay inaan sii joogo,” Nasri ayaa sidaa u sheegay jariiradda Sevilla.
“Kal ciyaareedkeygii igu dambeeyay waxaan qabay dhaawacyo badan waxaana doonay inaan bilaabo wax cusub, sidaa darteed waxaan la xiriiray kooxaha kale, laakiin markaan maqlay Sevilla waan ogaa inaan doonayo inaan halkan imaado.
“Sidoo kale waxaan wax ka waydiiyay Jesus Navas, David Silva iyo Nolito, kooxda, magaalada, wax kastana way fiicnaayeen.
“Waxaa jiray cunto fiican iyo gabdho shidan, waxaan la hadlay Guardiola wuxuuna ii sheegay inuu jiro tababare wayn oo caawiye ka ah Sevilla Juanma Lillo. Taas ayay ahaayeen dhammaan waxaan doonayay inaan ogaado, beelo ayay ii ahayd aniga.”.
Mourinho oo ka jawaabay in uu jeclaan lahaa ka badalidda shaqada Old Trafford Sir Alex
XOG: Juve oo qiime sare ku dooneysa Kroos